“हामी जनप्रतिनिधि शासक होइन, जनताको सेवक बन्नुपर्छ” SULSULE:A Truly Nepali News Portal
“हामी जनप्रतिनिधि शासक होइन, जनताको सेवक बन्नुपर्छ”
जसिप्रसाद पाण्डे, प्रमुख प्रमुख, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट
२०७६ माघ ६ मा प्रकाशित
कर्णाली प्रदेशको विकट पहाडी जिल्ला कालिकोटको सदरमुकाममा रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकामा ११ वटा वडा रहेका छन् । यहाँ भर्खरै मात्र सबै वडाको केन्द्रमा सजिलै पुग्न सकिने गरी सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरिएको छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अझै केही समय लाग्ने मेयर पाण्डे बताउँछन् । भूगोलका कारण अरु ठाउँमा १० लाखले सम्पन्न हुने काम पहाडमा एक करोडभन्दा बढी रकमले पनि गर्न नसकिने उनको तर्क छ । नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने कुल जनसंख्याको झण्डै एक तिहाइ दलित रहेको र उनीहरूको जीवनस्तर अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि नै बताउँदै तिनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्नको लागि नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र योजना अगाडि सारेको मेयर पाण्डेको भनाइ छ । उनीहरूलाई रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि बाख्रा पालनदेखि तरकारी खेतीको लागि समेत नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ । दीर्घकालीन आम्दानीका लागि तरकारी खेतीबाहेक फलफूलको बिरुवा रोप्नको लागि पनि नगरपालिकाले उनीहरूलाई प्रेरित गरिरहेको छ । यहाँ जडीबुटीदेखि पशुपालनको लागि उपयुक्त हावापानी रहेकोले नगरपालिकाले सोहीअनुरूपको योजना बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । यही नगरपालिका भएर हरेक वर्ष हजारौँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटक रारा तालको अवलोकनमा जाने भएकोले पनि यस नगरपालिकाको महत्व अझ बढेको छ । खाँडाचक्र नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको पर्यटनको सुरु गन्तव्य भएकोले पनि यहाँका ऐतिहासिक पुरातत्व बोकेका स्थानहरूको संरक्षण, मर्मतसम्भार र जीर्णोद्धारको लागि चासो लिएको उनको भनाइ छ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर मेयर पाण्डेसँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरि चौलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
निर्वाचित भएको करिब तीन वर्ष पुग्न लाग्यो, यसबीचमा तपाईंले के–के काम गर्नुभयो ?
खाँडाचक्र नगरपालिका घोषणा भएर पनि खासै विकास निर्माण र पूर्वाधारका हिसाबले त्यति गति लिन सकिरहेको थिएन । राजमार्गले छोए पनि नगरपालिका व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन । हामी निर्वाचित भएर आएपछि मात्र बल्ल निर्माणको कामले केही गति लिन थालेको छ । तिला नदीमा पक्की पुल निर्माणको सुरुवात ग¥यौँ र आगामी असोजसम्म त्यसको निर्माणकार्य सम्पन्न हुनेछ । सुर्खेतदेखि कालिकोटसम्मको राजमार्ग बीचबीचमा बिग्रेको अवस्था थियो । त्यसलाई अहिले सडक विभागसँग समन्वय गरेर मर्मतको काम पनि भइरहेको छ । यसअघि वार्षिकरूपमा ८० लाख बजेट विनियोजन हँुदै आएको र मेरै पहल र सक्रियतामा अहिले झण्डै एक अर्ब रकम सडक विभागबाट विनियोजन भएको छ । सडक बोर्डबाट दुई करोड दिने तयारी भएको छ । त्यसैगरी हामी निर्वाचित भएर आएपछि स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य इकाइ खोल्नुपर्ने नीति अख्तियार गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले त्यो कार्य गरिसकेका थियौँ । नगरपालिकाका ११ वडाहरूमध्ये १ नम्बरमा पहिले नै स्वास्थ्य चौकी थियो । यसैगरी ५ र ९ नम्बर वडामा स्वास्थ्य चौकी भए पनि बाँकी वडाहरूमा थिएन । अहिले सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइको स्थापना भइसकेको छ । पूर्वाधारको साथसाथै समाजिक क्षेत्रको विकास पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी प्रथा अझै कायम छ । सो कुप्रथाविरुद्ध कडारूपमा उत्रिनको लागि सबै वडाहरूलाई सचेत गराएको छु । सामाजिका कुप्रथाका विरुद्ध लाग्न विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसअन्तर्गत छवटा वडालाई छाउगोठमुक्त घोषणासमेत गरिसकेका छौँ । जातीय हिसाबले यस नगरपालिकालाई छुवाछुतमुक्त बनाएर घोषण गर्ने तयरीमा रहेका छौँ । यो वर्षभित्र त्यो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।
खाँडाचक्र नगरपालिकाको सबै वडाहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न कति समय लाग्ला ?
नगरपालिकाभित्रका सबै वडाहरूमा अहिले ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ११ वटै वडाको केन्द्र रहेको ठाउँसम्मको सडकलाई व्यस्थित गर्ने कामको सुरुवात पनि भइरहेको छ । साथै नगरपालिकाभित्र गरिबीको कारणले पढ्न नसकिरहेका भविष्यका कर्णाधार मानिएका बालबालिकालाई सुनौला हजार दिनअन्तर्गत पोषिलो खाजा कार्यक्रमको लागि गतवर्ष नगरपालिकाबाट ४३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम पूरै नगरपालिकाभरि लागू भएको छ । आमा र बालबालिका दुवैको स्वास्थ्य र वृत्तिविकासका लागि पोषिलो आहार आवश्यक छ भनेर नगरभित्र अभियानकै रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ ।
नगरवासीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नगरपालिकाले के–कस्ता योजना अगाडि सारेको छ ?
शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरलाई वुद्धि गर्नको लागि नगरपालिका निरन्तर अगाडि बढेको अवस्था छ । विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई दिवा खाजको व्यवस्था मिलाएका छौँ । नगरपालिका आफैँले स्थानीय तहको बारेमा जानकारी दिने किसिमका पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ भन्ने विषय अगाडि आएका छन् । तर, अहिले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौँ । नगरभित्र रहेका विद्यालयहरूको भवनदेखि भौतिक पूर्वाधारमा भने ध्यान दिएका छौँ । परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कामको पहल भइरहेको छ । नगरपालिकामा रहेको शिक्षा शाखाले यी सबै कामको थालनीसँगै नयाँ ढंगले आफ्नो काम गरिरहेको पनि छ । बाल शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । साथै ३२ वटा रहिआएकोमा त्यो संख्या बढाएर ५५ पु¥याएका छौँ । त्यसैगरी बाल शैक्षिक समग्री र बाल कक्षाकोठाको उचित व्यवस्थापन गरेका छौँ । विद्यालय अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएका छौँ ।
नगरपालिकालाई व्यवस्थित र सम्पन्न बनाउन के–कस्ता किसिमका योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?
नगरपालिकाको केन्द्र रहेको मुख्य बजारमा सडकको अवस्था राम्रो छैन र थिएन । सो काम सम्पन्न गर्न टेण्डरमार्फत झण्डै पाँच करोड रकम खर्चेर अहिले ढलान गरिएको छ । कर्णाली अञ्चलको मुल गेट नै यो नगरपालिका हो भन्दा फरक पर्दैन । मुगुको रारा ताल अवलोकन गर्न जानेहरू यही बाटो र नगरपालिका भएर जान्छन् । मुख्य प्रवेशद्वार नै यो यही नगरपालिका भएकोले पनि हामीले सरसफाइदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि योजना छनौट गरेर नै लगानी गरेका छौँ । यसैगरी विकास निर्माण, पर्यटन खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै अझ बढी फोकस गरेर भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना अगाडि सारेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन भनेर दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ ।
सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष लक्षित कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी नगरपालिकाले के–कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ ?
मैले माथि पनि भनिसकेँ, कर्णाली प्रदेशको यो प्रवेशबिन्दु भएकोले नगरपालिकाले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणको कामलाई नै जोड दिएको अवस्था छ । म निर्वाचित भएर आइसकेपछि पर्यटन क्षेत्रसँग लक्षित भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको छु । जस्तोः फोहरा दरबार, पञ्चदेवल, थोरेमा नेपालको नक्साको सुधार गरेका छौँ । यसैगरी पिलीमा युद्ध पर्यटक सङ्ग्रहालय, होमस्टे सञ्चालनको लागि पूर्वाधारको काम भइरहेका छन् । चुलीमालिका मन्दिर जाने बाटो अर्थात् पर्यटकीय सडक निमार्णको कार्य अगाडि बढाइएको छ । मान्म, बरालतु, बरालकोट जिम्जेडी हुँदै पतल झरना जाने सडकको निर्माण कार्यलाई जोड दिएका छौँ । म निर्वाचित भएर आएको सुरुको आर्थिक वर्षमा नै यो क्षेत्रमा २५ लाख, गतवर्ष फोहरा दरबार संरक्षणको लागि भनेर ५० लाख बजेटको व्यवस्थापन गरेका थियौँ । चालू आवमा पनि करिब डेढ करोड रकम व्यवस्थापन गरेका छौँ । सदरमुकाम र नगरपालिकाको केन्द्र भागमा रहेका यस्ता ऐतिहासिक र पुरातात्विक वस्तुलाई संरक्षण गर्दै जोगाउने र पर्यटकहरूको लागि अध्ययन अनुसन्धानको लागि पनि यो महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
नगरपालिकाभित्र रहेका उत्पीडित वर्गलाई लक्षित के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
जातीय हिसाबले भन्नुपर्दा यो नगरपालिकाभित्र ३३ प्रतिशत दलितहरूको बसोबास रहेको छ । यही वर्ग नै कमजोर, अशिक्षित र पीडित भएको पाइएको छ । यो वर्गलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र योजना पनि अगाडि सारेको छ । लक्षित वर्गको लागि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्दै कसरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर रोजगारी सिर्जना हुनेगरी काम अगाडि बढाएका छौँ । यसअन्तर्गत तरकारी खेती गर्ने चाहनेहरूको लागि निःशुल्करूपमा बीउ वितरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यसलाई शीत र प्रकोपबाट जोगाउनक लागि आवश्यक पर्ने पाल पनि निःशुल्करूपमा उनीहरूलाई उपलव्ध गराइसकेका छौँ । किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने अन्य समग्रीको पनि व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा आर्कषित गर्ने काम अहिले भइरहेको छ । यस नगरपालिकाको भूगोल विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ । यहाँ तराईमा हुने फलफूलदेखि उच्च पहाडी भू–भागमा फल्ने अन्य जातका फलफूल, तरकारी र अन्नबालीसमेत हुनेगरेका छन् । यसकारण पनि नगरपालिकाको तल्लो भेग अर्थात् तिला नदीको आसपासमा कागती, केरा, आँप, अम्बालगायत जातका फलफूलका बिरुवा रोप्ने काम सम्पन्न गरिएको छ भने माथिल्लो हिमाली अर्थात् उच्च भागमा सिमी, ओखर, स्याउको बिरुवा वितरण गरेर कृषकलाई रोप्नको लागि प्रेरित गरिएको छ । यी फलफूलका बिरुवा हुर्केर आम्दानी दिन समय लाग्ने भएकोले विपन्न वर्ग र निम्न आयस्रोत भएकाहरूलाई तत्काल आम्दानी हुने र लिन सकिने भएकोले बाख्रापालनको लागि पनि बजेटको व्यवस्था मिलाएका छौँ । यसबाट उनीहरूले लाभ लिन सक्छन् । गरिब दलितहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन र आत्मनिर्भरको लागि योजना आयोगसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने काम पनि भइरहेको छ । त्यो वर्गलाई माथि उकास्नको लागि प्राथमिकता साथ योजना आयोगमा प्रस्ताव पनि पेश गरेको छु । पाँच करोडभन्दा माथिको रकम माग गरेको छु । यो बजेट प्राप्त हुनसाथ गरिबी न्यूनीकरणको लागि त्यसले सहयोग पु¥याउने आशा मैले गरेको छु ।
योजना कार्यान्वनका लागि कर्मचारीहरूको साथ कस्तो रहेको छ ?
हामी निर्वाचित भएर आएको समयमा त कर्मचारी नभएर ठूलै समस्या भोग्नु परेको थियो । अहिले त्यसमा केही सुधार हुँदै गइरहेको छ । हामी पनि नयाँ र कर्मचारीहरू पनि अनुभवी नहुँदा काम गर्न समस्या पनि भयो । सुरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाप्रमुखहरू मिलेर बजेटको दुरूपयोगसमेत गरेको पाइयो । कतिसम्म भने कार्यालय प्रयोजनका सामान खरिद गरेको समान कार्यालयमा नआइपुग्दै भुक्तानी दिएको समेत भेटियो । सामान दाखिला नभई त्यसो गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको माग पनि गरियो । हामी निर्वाचित भएर नआउँदै र नगरपालिका घोषणा भएपछि सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागि भनेर सिधै एक करोड बजेट पठाएको थियो । मैले त्यो बजेटको बारेमा खोजी गरेर बदमासी गर्ने कर्मचारीसँग अपुग सामान दाखिला गर्न लगाएँ ।
तपाईंको नगरपालिकामा सुशासनको अवस्था कस्तो छ त ?
अरु स्थानीय तहमा के भएको छ म भन्न सक्दिन । तर, मरो नगरपालिकामा तीन–तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयन र कार्य प्रगतिकको विषयमा समीक्षा हुनेगरेको छ । पुँजीगत र चालू खर्च विषयगत शाखाले के–कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसको उपलब्धिका बारेमा समीक्षा गर्ने गरेको छु । कुन योजनामा प्रगति के भएको छ र उनीहरूले कसरी भुक्तानी लिइरहेका छन्, त्यसबारेका स्थलगत सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर भुत्तानी गर्नेगरेका छौँ । नगरपालिकामा पूर्वाधार चाहिन्छ, तर त्यसको लागि पहिला आम नगरवासीमा जनचेतनाको आवश्यकता पर्छ । त्यसैगरी गरिबी न्यूनीकरणको लागि उनीहरूलाई स्वरोजागार बनाउँदै अगाडि बढ्नको लागि पनि सुशासन आवश्यक छ । यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले नगरपालिकामा बडापत्र राखेका छौँ । त्यसमा कुन–कुन निकायले के–के काम गर्छ, कति दिन र कति समयमा सेवाग्राहीले सेवा लिनसक्ने कुरा उल्लेख गरेर जानकारीको लागि टाँस गरेका छौँ । साथै नगरपालिकाले गरेका कामको बारेमा जानकारी लिन सक्ने गरी प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेका छौँ । यसैगरी वडा कार्यालयबाट सम्पन्न हुने कामको बारेमा रेडियो बहस कार्यक्रममार्फत नगरवासीहरूमा जानकारी दिने काम भइरहेको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरू नै सिंह बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ, तपाईंको नगरपालिकाको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो तर जनताले सोचेअनुरूपको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । किनभने हिजो एउटा गाविस हुँदा एक जना सचिव हुन्थ्यो, जनप्रतिनिधिहरू पनि थिएनन् । जन्मदर्तादेखि मृत्युदर्तासम्मका कामको लागि समस्या थियो । यी काम अहिले वडाबाट नै भइरहेका छन् । अहिले वडा सचिवहरू सबै वडामा छन् । अहिले जनताले चाहेको सेवा लिन सकेका छन् । हिजोका दिनमा केही समस्या थियो र त्यो आरोप गाइएको होला तर आजका दिनमा धेरै कुराहरू सहज भएका छन् । अरु स्थानीय निकायको हकमा भन्न सक्दिन तर मेरो नगरपालिकामा सुशासन राम्रो छ । जनताले कुनै कठिनाइ भोग्नुपरेको छैन । अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रोसँग भएकोले पनि काममा कुनै बाधा परेको छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको अनुभूति जनतालाई दिलाउनु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । नगरपालिकाका साथै वडा कार्यालयहरूमा रहेको स्रोतहरूलाई परिचालन गरेर जनताको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व पनि हो । हामीले उनीहरूलाई फरक अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्दछ । अहिले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा जनतासँग गर्ने व्यवहार शासन गर्ने शैलीबाट अगाडि बढाइएको मैले पनि सुनेको छु । हामी शासक बन्नका लागि निर्वाचित भएका होइनौँ ।हामी जनताको सेवक बन्नुपर्छ ।
नगरपालिकाको कुल बजेट कति छ ?
आन्तरिकरूपमा हामीलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ । हामीलाई अहिले ३३ करोड प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले जम्मा ५० लाख उपलब्ध गराएको छ । समपुरक बजेट र राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि हामीलाई बजेट पठाउने भएकोले करिब ६३ करोडको बजेट बनाएका छौँ । अन्तरिकरूपमा गतवर्ष ५० लाखको राजस्वको लक्ष्य राखिएको थियो । चाल वर्षको लागि त्यसलाई बढाएर एक करोड उठाउने अनुमान गरेका छौँ ।
नगरपालिकाभित्र कालोपत्रे सडक कति बनेको छ ?
राजमार्गले १० वटा वडालाई छोएको छ । तिला नदीको किनारै किनार भएर कर्णाली राजमार्ग गएको छ । तर, नगरपालिका आफैँले सडकको निर्माण गरेर स्तरोन्नति गर्ने काम गरिहेको छ । कर्णाली राजमार्ग बनेको पनि निकै वर्ष भएकोले सडकमा खाल्डाखुल्डी परेको छ । त्यसका लागि सडक विभागसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । सडक विभागको जिम्मा रहेको राजमार्गमा नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्न पनि मिल्दैन । प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्न सक्दैन । तर, मेरो नगरपालिकाभित्र यस्तो विजोग देखेपछि जनताले मलाई फोन गरेर गुनासो गर्छन् । तर, हामीले गर्न सकिने ठाउँ नै छैन । यसले गर्दा यस्ता विषयमा संघीय सरकार, सडक विभाग र सडक बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यस विषयमा मैले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसँग गतवर्ष कुराकानी पनि गरेँ । तपाईंहरू हिँड्ने बाटोमा चाहिँ असिमित बजेट दिनुहुन्छ, तर कर्णाली प्रदेशलाई किन यसरी विभेद गर्नुहुन्छ भनेर कुरा राखेँ । उहाँले म विचार गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नै मन्त्री रहनुभएन । नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ । उहाँसमक्ष पनि म मेरा कुरा राख्ने छु । संघीय सरकारको जिम्ममा रहेको राजमार्गको यो हालत हुनु भएन । यसबाट स्थानीय जनताले दुःख पाएका छन् । (आर्थिक दैनिक बाट)
‘अन्य प्रदेशको तुलनामा विकास निर्माणमा प्रदेश नं. ५ अगाडि छ’
‘यहाँको ‘इम्प्रुभ’भन्दा राम्रो व्यवस्थापनले लोडसेडिङ हटेको हो’
‘चार लाख मानिसले मेलाको अवलोकन गर्ने अपेक्षा छ’
‘कर्जाको उच्चतम सदुपयोग आर्थिक मजबुतीको एउटा आधार हो’
‘आगामी दश वर्षभित्र एभिएसन क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउँछ’
‘एमसीसी नेपाल भित्र्याउन हतार गर्नु हुँदैन’
“कर्मचारी आउन नमान्नु विकट क्षेत्रको विडम्बना हो ”
‘मोबाइल व्यवसाय धरापमा छ’
विद्यार्थीलाई उच्च तहमा पुग्ने हैसियतको बनाउनु शिक्षकको कर्तव्य हो